Usoro ọrụ gọọmentị Vatican na-eme mkpesa maka "nchịkwa, ido onwe onye n'okpuru" maka okpukperechi
Paolo Tescione	Edere ya Julaị 31, 2020 Julaị 31, 2020
Kadịnal João Brazil de Aviz, onye isi Vatican na-ahụ maka ndụ nsọ, katọrọ ihe o kwuru bụ “nchịkwa” nke ụmụ nwoke na-ejidekarị ụmụ nwanyị na Chọọchị Katọlik ma kwusie ike mkpa mmeghari ohuru. nke ndu okpukpe n’ozo niile.
"N'ọtụtụ oge, mmekọrịta dị n'etiti ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị edoro nsọ na-anọchite anya usoro mmekọrịta nke mmekọrịta nke ido onwe onye na ịchịkwa nke na-ewepụ echiche nnwere onwe na ọ joyụ, nrubeisi a na-aghọtahiere," Bra de de pez na N'ajụjụ ọnụ na nso nso a.
Brazili de Aviz bụ onye isi ọgbakọ ọgbakọ Vatican maka ọgbakọ Institrated nke Consecrated Life na Society nke Apostolic Life.
Mgbe ya na SomosCONFER na-ekwu okwu, akwụkwọ mbipụta nke nzukọ nke Spanish Religion, otu nzukọ maka ọgbakọ okpukpe dị na Spain, Brazị de de Aviz kwuru na n'ime obodo ụfọdụ, ndị isi 'na-agbachitere', na-ahọrọ mmekọrịta na ụlọ ọrụ iwu ma ọ bụ gbasara ego. ndi “obere” nwere ikike nke inwe ndidi na ihunanya nke nkwurita okwu na ntụkwasị obi. "
Ka osila dị, nke a abụghị nanị okwu nke Brazị Avi depụtara na ntụgharị uche ya, nke bụ akụkụ nke nyochaghachi sara mbara nke ndụ okpukpe n'ihi ike Pope Francis na-eme ka e dozigharị ihe owuwu nke na-agaghị eso ụdị ngwa ngwa ndị ọzọ. 'izisa ozi ọma.
Ọtụtụ asịrị n'ime obodo okpukperechi na ịkwagharị, ụkọ ọrụ maka ọrụ nchụaja na ndụ okpukpe, nnukwu nchekwa na nrụgide dị ukwuu na mmetọ na nrigbu nke ụmụ nwanyị dị nsọ, esowo kpata ọgba aghara n'ime ndụ. Okpukpe nke ọtụtụ ndị na-amalite amalite.
N'ọtụtụ mba dị na Europe, Oceania na America, enwere ụkọ ọrụ maka ndụ nsọ, nke "emeela agadi nke ukwuu, ọ na-afụ ụfụ site na enweghị ntachi obi," ka Brazị de Aviz kwuru.
“Ndị na-apụ apụ na-ekwukarị na Francis kwuru maka ihe a dịka 'ọbara ọgbụgba'. Nke a bụ eziokwu maka ma nwoke ma nwanyị ndụ na - atụgharị uche ", o kwuru, na - achọpụta na ọtụtụ ụlọakwụkwọ" adịla obere ma ọ bụ na - apụ n'anya ".
Site na nke a, Brazịịn de Aviz kwenyesiri ike na ngbanwe nke afọ, nke Pope Francis na-ezokarị dịka "afọ mgbanwe", edugawo "mmetuta ọhụụ iji laghachi soro Kraịst, na ndụ ebighi ebi dị ọcha na obodo , mmezigharị usoro, imeri mkpagbu nke ikike na nghọta na ikike, ojiji na nchịkwa nke akụ ”.
Agbanyeghị, “ụdị mgbasa ozi ọma ochie na nke na-esighi ike ka na-emegide mgbanwe dị mkpa" ịgbara Kraịst àmà n'ọnọdụ nke ụwa nke oge a, o kwuru.
N'ihi ọtụtụ asịrị nke bilitere n'afọ ndị na-adịbeghị anya metụtara ndị ụkọchukwu, ndị bishọp na ndị guzobere obodo ndị edoro nsọ ma mee mmegharị, "ọtụtụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị doro nsọ n'oge a na akụkọ ntolite na-anwa ịchọpụta nke ọma isi nke ntọala nke prọfesọ,", Brazili kwuru.
Akụkụ nke usoro a, o kwuru, pụtara ịchọpụta ọdịnala na okpukperechi "oge ndị ọzọ" na ikwe ka "amamihe nke theka na Magisterium ya na-eduzi".
Iji mee nke a, o kwuru, ọ na-achọ ka ndị edoro nsọ nwee "obi ike", ma ọ bụ ihe Pope Francis kpọrọ parrhesia, ma ọ bụ audacity, iji "mata site na njem nke Chọọchị dum".
Brazili de Aviz zoro aka n'echiche nke "ike ọgwụgwụ" nke ọtụtụ ndị nwanyị nwanyị okpukpe, ọkachasị, ahụmihe nke bụkwa isiokwu nke isiokwu dị na mbipụta July nke akwụkwọ mkpopụta ndị nwanyị kwa ọnwa nke akwụkwọ akụkọ Vatican, Donna, Chiesa. .Wa.
N’edemede na-egosipụta nrụgide na ọbụna ihe mgbu nke ụmụnna nwanyị ji okpukpe kpọrọ ihe na-echekarị, Nwanna Nwanyị Maryanne Lounghry, onye ọkà mmụta gbasara mmụọ na onye otu kọmịshị nke International Union of Superiors General na Union of Superiors General, nke na-anọchite anya ya. ndi nwanyi na ndi nwoke n’otu n’otu n’ime okpukperechi, ebumnuche nke komputa a bu “iwulite obodo ndi nwere onwe ha” ma kwusi ihe mgbochi dika ikwuputa isi okwu dika ndi ike na mmeko nwoke na nwanyi.
Otu n'ime ihe Lounghry kwuru na kọmịshọn ahụ na-eme bụ ide "koodu omume" nke mere na ndị edoro nsọ ghotara ikike ha, oke ha, ọrụ ha ma dịrịkwa njikere karị maka ọrụ ha na-arụ.
N'ikwu okwu ọkachasị nke ụmụnna nwanyị ndị ji okpukpe kpọrọ ihe, bụ ndị a na-erigbu ma na-ezochi ọnọdụ na-egosipụta ihe ha na ezumike, enweghị ụgwọ ọrụ n'ụlọ, Lounghry kwuru na "Ọ dị mkpa ka nwanne nwanyị mara ihe ọ nwere ike ịrịọ maka ihe a na-agaghị arịọ. ọ ".
Ọ sịrị, "Onye ọ bụla" ga-enwerịrị ụkpụrụ omume, akwụkwọ nkwekọrịta na onye bishọp ma ọ bụ pastọ ", n'ihi na nkwekọrịta doro anya na-eduga na ntụkwasị obi ka ukwuu.
Ọ sịrị, "Ọrụ echekwabara maka otu afọ na-eme ka m nwee udo na obi iru ala, yana ịmara na enweghị ike iziga m n'akụkụ ọzọ nke ụwa n'oge ọ bụla ma ọ bụ oge m nwere ike ịga ezumike," ma ọ bụrụ na amataghị ókè ahụ. Site na mbọ m, agbanyeghị, enweghị m ike ijide nchekasị ahụ. Beingghara ịchịkwa ndụ gị, enweghị ike ịhazi, na-emebi ahụike. "
Lounghry tụrụ aro ịmepụta usoro, dịka ụgwọ ọnwa, ezumike ezumike kwa afọ, ọnọdụ ibi ndụ dị mma, nnweta ịntanetị, yana oghere dị iche iche kwa afọ.
O kwuru, sị: “Inwee mkparịta ụka mgbe niile, na-enweghị mmetụta ọ bụla. "N'iji iwu doro anya, ha na - egbochi mmejọ ma ị nwere ụzọ doro anya ị ga - esi merie" mmejọ mgbe ọ mere.
O kwusiri ike mkpa ọ dị maka iwu doro anya doro anya nke dị na ebe obibi ma ọ bụ ebe obibi ndị mọnk gbasara ihe dị ka njem ma ọ bụ ọmụmụ, iji zere mmụba.
Ihe a nile, Lounghry kwuru, ga - enyere aka mepụta ọnọdụ ntụkwasị obi karị nke ga - enyere ụmụnna nwanyị ndị emegburu onwe ha ohere ịbịa n'udo ngwa ngwa.
O siri ike ịmata mgbe nwanne ya nwanyị dinara n'ike; ọ bụ ihe mere eme ụbọchị, mana anyị anaghị ekwu maka ya maka ihere, "ka o kwuru, na-ekwusi ike na" ọgbakọ nwanyị kwesịrị ijide n'aka na ọgbakọ ga - enyere ya aka idozi ya, na nghọta na ịkekọrịta ya. "
Otu edemede dị iche nke Nwanna Nwanyị Bernadette Reis, onye na-arụ ọrụ na Presslọ Ọrụ Mgbasa Ozi Vatican, kwuru na mbelata nke ọnụ ọgụgụ ụmụ nwanyị na-abanye ndụ dị nsọ n'oge na-adịbeghị anya bụ n'ihi mgbanwe nke ihe ndị metụtara mmekọrịta mmadụ na ibe ya mere ka ndụ ya dị nsọ karịa. mara mma, taa, ha adịkwaghị agbazi.
Achọkwaghị izizi ụmụ agbọghọ n'ebe obibi ndị nọn iji nweta agụmakwụkwọ ma ụmụ agbọghọ anaghị adabere na ndụ okpukpe iji nye ha ọmụmụ na ohere ọrụ.
N'ajụjụ ọnụ ya, Brazị de Aviz kwuru na n'ọnọdụ nke ụwa a, "omume ọtụtụ omume ga-agbanwe" iji guzobe oge "ike" maka ndị na-etinye ndụ dị nsọ.
O kwudosiri ike na nhazi bụ usoro na-aga n'ihu, na-ekwupụta na oghere dị na mbido mbụ ma ọ bụ na-aga n'ihu "enyerela mmepe mmepe nke omume onwe onye adịghị ka ya na ndụ dị nsọ na obodo, nke mere na mmekọrịta na-emetọ ma mepụta owu ọmụma na nwute ”.
Ọ sịrị, "N'ọtụtụ obodo, enwere ntakịrị mmepe na ịmara na nke ọzọ bụ ọnụnọ Jizọs na nke ahụ, na mmekọrịta anyị na ya hụrụ n'anya na nke ọzọ, anyị ga-ekwe nkwa ọnụnọ ya mgbe niile n'obodo."
Otu n'ime ihe mbụ nke Brazil de Aviz kwuru na ya ga-atụgharịrị maka usoro echichi ahụ bụ “ka esi eso Jizọs”, ma otu esi amalite ndị ntinye na ntọala.
Ọ sịrị, "Kama ịbugharị ụdị ndị emegoro, Francis na-akpali anyị imepụta usoro dị mkpa nke Oziọma ahụ nyere aka nyere anyị aka ịbanye na omimi nke onyinye nyere onye ọ bụla", ka o kwuru, na-egosi na Poopu Francis na-ekwukwa ugboro ugboro na a na-akpọ ọrụ egwu niile. ihe "evicalical radicalism".
Brazịil kwuru, "N'ozi ọma, ụdị ịgba ọkụ a bụ ihe jikọrọ ndị niile", na-agbakwunye na "enweghị ndị na-eso ụzọ nke 'klas nke mbụ' na ndị ọzọ nke 'klas nke abụọ'. Thezọ ozigbo ozigbo bụ otu onye ahụ ".
Agbanyeghị, ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị edoro nsọ nwere ọrụ ha chọrọ ibi ebi “ebi ndụ nke na-eche uru ala eze Chineke dị; ịdị ọcha, ịda ogbenye na nrube isi n’ụzọ ndụ Kraịst”.
Ọ sịrị, nke a pụtara na "A kpọrọ anyị ka anyị nwekwuo ntụkwasị obi na ịbanye na Churchka dum na ndozi ndụ nke Pope Francis tụpụtara ma mejuputa ya".
← Na post gara aga Gara aga post:Mwepu iji nweta graces: 31 Julaị 2020
Ọzọ Post → Post ozo:Nraranye nye Nna nke Nna raara nye ọnwa nke August